सोचाइको ‘प्यासन’- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३१, २०७६ देवेन्द्र भट्टराई
तीन युवती र एक युवा मिलेर दुई वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक परिवर्तनको एउटा साधारण 'आइडिया' ले गत साता संसारकै उत्कृष्ट पुरस्कार जित्यो  । पोषणमालाको प्रतिस्पर्धामा एक सय देशका १२ सय प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर ५० हजार अमेरिकी डलर हात पारेका यो समूहको आइडिया के हो त ? सोचाइ र यसको कामबारे देवेन्द्र भट्टराई लेख्छन् :
काठमाडौं उपत्यकामा जन्मे–हुर्केका बोनिता, नेहा, मन्जिता र आशुतोष पढाइका आधारमा अलग दुनियाँका पात्र हुन् । बोनिताले खाद्यान्न तथा पोषणमा मास्टर्स गरेकी छन् भने मन्जिता राजोपाध्याय (२६) चाइल्ड डेभलपमेन्टमा मास्टर्स गर्दैछिन् । नेहा मल्ल (२९) फार्मेसी पृष्ठभूमिकी हुन् भने आशुतोष फिल्म मेकिङका विद्यार्थी हुन् । तर, एकअर्कामा टाढैका चिनारु भए पनि यी चारैजनामा एउटा साझा ‘प्यासन’ भेटियो— पोषण र पौष्टिकताको ‘प्यासन’ ।
यो अभियानमा अगुवा रहिन्— बोनिता शर्मा (२७) । खाद्यान्न तथा पोषणमा पद्मकन्या क्याम्पसबाट मास्टर्स गरेकी बोनिता दुई वर्षअघिसम्म कुनै एनजीओमा काम गर्थिन् । पोषणबारेको पढाइका कारण यस सम्बन्धमा स्थलगत बुझाइ र अनुभव बटुल्न उनी काठमाडौंका छेउभित्ता चहार्ने गर्थिन् । देशभरको कुपोषण इन्डेक्स हेर्दा अघिल्ला दसभित्र ललितपुर जिल्ला पनि रहेको उनले थाहा पाइन् । ‘एक दिन घुमफिरमै ललितपुरको लुभु पुगेका थियौं,’ बोनिताले सुनाइन्— ‘एउटी आमाले आफ्नो २ महिनाको दुधे बालकलाई काजु घोटेर ख्वाउँदा काजुको टुक्रा अट्केर बच्चाको मृत्यु भएको रहेछ । त्यसपछि त्यो आमालाई घरपरिवारबाटै निकाला गरिएको रहेछ । यही कुराले खानेकुराको चेतनामा काम गर्ने आँट पलायो ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि जन्मदेखि ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्रै ख्वाउनुपर्छ भनेर निर्देश गरेकामा कति उमेरका बालबच्चालाई के ख्वाउने, गर्भवती वा सुत्केरीका हकमा के गर्ने भन्ने सामान्य ‘चेतना’ समेत नरहेको धरातलमा बोनिता उभिएकी थिइन् । त्यही धरातलमा उभिएर सोसल चेन्जमेकर्स एन्ड इन्नोभेटर्स (सोचाइ) भन्ने संस्था जन्मिएको थियो । यहींबाट ‘पोषणमाला’ जन्मिएको थियो, यसैले अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको हो ।
पोषणका लागि युवा
एकदमै साधारण तरिका र बुझाइमा पौष्टिक खानेकुराको ‘चार्ट’ बनाउने र बुझाउने काममा ‘सोचाइ’ का युवायुवती लागिपरेका छन् । ‘सुरुमा मोबाइल–एप्स बनाउने कि भन्ने थियो । तर, गाउँमा आमाहरू मोबाइल चलाउनै मुस्किल मानिरहेको पायौं । त्यही भएर साधारण मालाको अवधारणा आयो,’ नेहा भन्छिन्— ‘मालाको रंगअनुसार खानेकुरा छनोट र तोकिएको अवधि (२४ महिना) भित्र बच्चालाई ख्वाउनुपर्ने खानाको चार्ट यसमा छ । अहिले लुभु, आमा समूहसहितमा गरेर नौ सयजना आमाहरू हाम्रो पोषण चेतनाको अभियानमा जोडिनुभएको छ ।’
यो कलरफुल (पोषण) माला हरेक आमालाई दिइएको हुन्छ । सेतो, खैरो, पहेंलो, हरियो र नीलो रंगको मालाले खानेकुराको समूह, अवस्था र समयलाई निर्धारण गर्छ । यही पोषण मालाको नवीनतम आइडियालाई ‘युनिसेफ एसिया–प्यासिफिक युथ इन्नोभेसन च्यालेन्ज’ ले ‘उत्कृष्ट ३’ ठहर गर्दै सन् २०१६ मा ५ हजार डलरसहित पुरस्कृत गरेको थियो । उक्त स्पर्धामा विश्वका ६ सयवटा यस्ता ‘आइडिया’ आएका थिए ।
'केटाकेटी काम' को चिनारी
अहिले सोचाइ समूहले राष्ट्रसंघले तोकेको दिगो विकास लक्ष्यका १७ मध्ये १० वटा लक्ष्यमा आधारित रहेर नवीनतम काम गर्ने शैली र उपाय निकालेको हो । बेलायतस्थित च्यारिटी संस्था ‘वन यङ वर्ल्ड’ ले आफ्नो कार्ययोजनामा पारेको यो दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने नवीनतम आइडिया खोज्नुपर्ने एक शीर्षक थियो— ‘भोकमरीको अन्त्य’ । आशुतोषध्वज कार्की (२७) का अनुसार, यही शीर्षकलाई समातेर केही सिर्जनात्मक काम देखाउने उपायमा ‘पोषणमाला’ जन्मिएको थियो ।
सोचाइकी प्रमुख संस्थापक बोनिताका अनुसार, कुपोषण सूचकांकमा ५ वर्षमुनिका बालबच्चालाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ । तथ्यांकअनुसार, नेपालमा २८ लाख ५ वर्षमुनिका बालबच्चामध्ये ३८ प्रतिशतमा पुड्कोपना छ, २७ प्रतिशतमा ‘कम तौल’ रहेको अवस्था छ । युनिसेफका अनुसार, कुपोषणसँग जोडिएका रोगहरूकै कारण ४५ प्रतिशत बालबच्चाको निधन हुने गरेको छ ।
‘सुरुमा सरकारी अड्डा–कार्यालय धाउँदा पनि यी केटाकेटीले के पो गर्लान् र ? यो माला बोक्दैमा के हुन्छ र (?) भन्थे,’ मन्जिताले सुनाइन्— ‘खासमा हामीले चालेको कुनै क्रान्तिकारी कदम थिएन, खानपिनको सामान्य सूत्र मात्रै बनाएका थियौं । तत्काल उपलब्धि हेर्ने बेला होइन तर, ज्ञान र सूचना बाँड्नमा हामी सफल भएका छौं ।’ उनका अनुसार, झन्डै २ वर्षदेखि ललितपुर, लुभुका आमा र अन्य आमा समूहबाट ९ सय जना आमाहरू यो पोषण विधिमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, पोषण विधि र उपायका बारे जानकारी गराउन यो समूह सलम्बु (काभ्रे), शिखरापुर (फर्पिङ), इन्द्रेश्वरी (सिन्धुपाल्चोक) लगायत ठाउँका सरकारी विद्यालयमा पनि पुगिरहन्छन् । पोषणयुक्त खानेकुराको प्रदर्शनी गरिरहेका हुन्छन् । ‘हामी खानेकुरामा गरिब छैनौं । तर, व्यवस्थापन मात्रै नजानेको हो,’ बोनिता भन्छिन्— ‘पौष्टिकताको वर्ग हेरी अनार वा सुन्तला नै चाहिन्छ भन्ने होइन, बरु गाउँमा पाइने हलुवावेद, नास्पातीजस्ता फलफूल मेनुमा राखे पनि हुन्छ ।’
यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा आमाहरूमा बढेको रक्तअल्पताका बारे पनि यो समूह सचेत भएर खाद्य चेतना विस्तारमा लागिपरेको छ । सोचाइ समूहले पोषणमालासँगै नवयौवना र किशोरीका लागि ‘महिनावारी माला’ को आइडिया पनि तयार पारेको छ जसबाट महिनावारीको शारीरिक प्रक्रिया र अवस्थाबारे चेतना बाँड्न सकिन्छ । यो माला र महिनावारीबारेको सचेतना अभियान लिएर ‘सोचाइ’ का युवायुवती विभिन्न अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय जाने गरेका छन् ।
१०० देश, १२०० आइडिया
सोचाइको पृष्ठभूमिमा अमेरिका ग्लोबल बिजिनेस पढेर आएकी इभा ज्ञवाली पनि छिन् जो कुनै अभियानको ‘आइडिया’ निकाल्न र ‘डिजाइन’ तयार गर्न सहयोगी रहँदै आएकी छन् । मानिसलाई बीचमा राखेर आइडिया निकाल्ने प्रक्रिया ‘डिजाइन–थिङ्किङ’ बाट प्रभावित रहेर ‘सोचाइ’ मा नयाँ अवधारणा निकाल्ने गरिएको आभाले सुनाइन् ।
यो साता ५० हजार डलरसहित पुरस्कृत पोषणमाला (आइडिया) को स्पर्धामा विश्वका १ सय देशबाट प्रतिस्पर्धी आएका थिए । सहस्राब्दी लक्ष्यको नम्बर २ अर्थात् ‘भोकमरीको अन्त्य’ शीर्षकमा १२ सयवटा आइडियाहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । ‘यही स्पर्धामा हाम्रो सोचाइअन्तर्गत पोषणमालाले उत्कृष्ट आइडिया बन्ने अवसर पायो,’ बोनिता भन्छिन्— ‘खासमा हामीले सोचेभन्दा ठूलो अवसर र उपलब्धि भएको छ, हाम्रो यो आइडिया ।’
अबको अर्को चरणमा भने पोषणयुक्त खानेकुराको खाद्य चार्टअनुसार ‘प्याकेज’ बनाएर सहुलियतमा बेच्ने योजना पनि सोचाइले राखेको रहेछ । सोचाइ समूहका लागि हिजोसम्म ‘साइड ड्युटी’ जस्तो मात्रै रहेछ— यो काम । सबैजना प्यासन–ड्राइभन भएकैले आइडिया रस अभियान अघि बढेको रहेछ ।
‘तर अब भने सबै सपना र योजना यसै अभियानमा लगाउने भएका छौं,’ अनामनगरभित्रको गल्लीमा भेट्नै मुस्किल पर्ने अफिसको छतमा बसेर बोनिताले भनिन्— ‘अब यो पोषण अभियानलाई खाद्य चेतना र आवश्यकताका आधारका सबै (१० जिल्ला) मा विस्तार गर्ने आँट पलाएको छ । यति छिट्टै यसरी कुनै ‘रिकग्निसन’ पाइएला भन्ने थिएन, हामी खुसी र अचम्ममा एकैचोटि परेका छौं ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५०